Ndekupi kwandingachaja mota yangu?
Pamba mune yega garaji / driveway, kana kunzvimbo yakasarudzika yekupaka / yekugovana yekupaka nzvimbo (yakajairika kumafurati).
Kubasa panzvimbo yekupaka hofisi yako, ingave yakachengetedzwa kana (semi) yeruzhinji.
Mune ruzhinji mumigwagwa, munzira huru, uye pane chero nzvimbo yeruzhinji yekupaka iwe yaunogona kufunga - semuenzaniso, nzvimbo dzekutengesera, maresitorendi, mahotera, zvipatara nezvimwe.Kunyangwe iwe uchikwanisa kuwana zviteshi zvese zvechaji zveveruzhinji zvinoenderana nekuti kadhi rako rekuchaja rinofambidzana here. Kana "kusabatana" kukaitwa, iwe une simba rekuchaja kune vakasiyana siyana vanachaja vechiteshi.
Zvinotora nguva yakareba sei kubhadharisa mota yangu?
Nguva dzekuchaja dzinosiyana zvichienderana ne: yako yero bhatiri reji, yako bhatiri kugona, yako chiteshi chechaji kugona uye marongero, pamwe nekugona kwesosi yako yekuchaja simba sosi (eg kungave kuri kumba kana chivakwa chehofisi).
Plug-in mahybridi anoda maawa 1-4 kuti akwanise kubhadhariswa zvizere, nepo mota dzizere-dzemagetsi dzinoda maawa mana kusvika masere (kubva pa0 kusvika pa100%). Pakati nepakati, mota dzinomiswa pamba kusvika maawa gumi nemana pazuva, uye kubasa kwemaawa masere pazuva. Ine chiteshi chekuchaja chauinacho, nguva yese iyi inogona kushandiswa kukwidza mota yako kusvika ku100%.
Nguva dzose magetsi: Unyeverwe kana uchichaja EV yako kubva kune yemagetsi magetsi. Kubhadharisa pamba kunoda chaiyo tambo yekuchaja iyo inodzivirira kudzima kwemagetsi uye kupisa zvakanyanya. Uye zvakare, iwe zvakare uchafanirwa kuve nechokwadi chekuti chiteshi chiri padyo nemotokari yako, sezvo iwe ungatombofa wakashandisa yekuwedzera tambo kuchaja mota yako. Asi kunyangwe neidzi chengetedzo dzakatorwa, kubhadharisa kubva kubhenefiti yakajairwa zvakanyanya, sezvo zvivakwa zvekugara zvakawanda zvisina wired kutakura magetsi emagetsi. Nguva dzekuchaja dzinoenderana nenyika iwe yauri. Kune EV ine huwandu hwe160 km, iwe unogona kutarisira nguva yekuchaja ingangoita 6-8 maawa muEurope.
EV kuchaja chiteshi: Iyi ndiyo nzira yakakurudzirwa kwazvo yekuchaja mota, sezvo ichiita yakachengeteka uye inoshanda mashandiro emota yako uye magetsi magetsi (semuenzaniso imba kana hofisi chivakwa) chinzvimbo. Nekamuri rekuchaja rauinaro, pese paunorova mugwagwa une chokwadi chekuve nemotokari yakazara yakazara nehurefu hwakawanda. Chiteshi chekuchaja chinogona kubhadharisa kanokwana kasere nekukurumidza kupfuura chinobuda nguva dzose. Izvi zvinoreva kuti chero EV ichabhadhariswa 100% mumaawa 1-4 chete. Tsvaga muongororwo wenguva yekuchaja yeakajairika masimba ebhatiri pano.
Chiteshi chekuchaja nekukurumidza: Zviteshi zvekuchaja nekukurumidza zvinobuda kazhinji kunze kwemaguta uye munzira huru. Kunyangwe ichikurumidza (inobhadharisa mumaminetsi makumi maviri nemakumi matatu), avhareji yekuchaja nekukurumidza inounza iyo EV kusvika chete ku80% panguva imwechete yekuchaja. Nekuda kwemidziyo inodhura uye Hardware ezviteshi zvekuchaja nekukurumidza, aya majaja anowanzo kungotengwa nekuvakwa pachikumbiro nehurumende dzemuno.
Ndeupi rudzi rwechaja yekuchaja yandinofanira kuisa?
Kune akatiwandei emachiteshi ekuchaja - anosanganisira Chikamu 1, Chikamu 2 uye DC Yekuchaja - saka iyo yaunosarudza inoenderana nezvinhu zvinoverengeka. Izvi zvinosanganisira anotarisirwa makasitoma ekushandisa kesi, mutengo uye saiti dhizaini kufunga.
Ndeapi saiti dhizaini zvinhu zvinokanganisa kuisa mutengo?
Yekuchaja chiteshi yekumisikidza mitengo inogona kupfuura mutengo weiyo hardware pachayo uye inokurudzirwa nenhamba yezvigadzirwa zvinhu zvinofanirwa kutariswa senge:
Parizvino iripo sevhisi yemagetsi. Zvese zvitsva zviteshi zvekuchaja zviteshi zvinofanirwa kuve nemutoro ongororo inoitwa pane iyo fosi yemagetsi inoda kuona kana paine mukana wekuwedzera eEchaji zviteshi. AC Level 2 zviteshi zvinoda yakatsaurirwa 240-volt (40 amp) wedunhu uye kusimudzira sevhisi yemagetsi inogona kudikanwa.
Kure pakati penzvimbo yemagetsi uye chiteshi chekuchaja. Iyo yakareba kureba pakati penzvimbo yemagetsi neEV kuchaja chiteshi zvinoreva yakakwira yekumisikidza mitengo nekuti inowedzera huwandu hwekukosha kudiridza (uye kugadzirisa), rukoronga, uye waya. Izvo zvinodikanwa kudzikisa chinhambwe pakati penzvimbo yemagetsi neEV kuchaja chiteshi zvakanyanya sezvinobvira uku uchitarisawo nzvimbo yechaja chiteshi pane iyo chivakwa.
Nzvimbo yekuchaja chiteshi pane iyo chivakwa. Funga nezve zvinoitika zvekuisa chiteshi chekuchaja pane imwe nzvimbo pane chivakwa. Semuenzaniso, kuisa nzvimbo dzekuchaja chiteshi kumashure kweichi chivakwa kunogona kuvhiringidza mashandisiro avo, asi vamwe vatengi vanogona kugumbuka kana chiteshi chechaji chikaiswa munzvimbo dzekupaka dzepamusoro dzinowanzo gara dzisina munhu nekuti kune vashoma vatyairi veEV.
Zvimwe zvekufunga zvine pesana pashoma pakuisa mari asi zvinogona kukanganisa mashandiro anoita chiteshi pakubatsira vatyairi veEV nevamwe vatengi. Mimwe yeiyi inosanganisira nzira iyo tambo yekuchaja inotora painenge ichishandiswa uye kupaka manejimendi maitiro.
Ndinogona kubhadharisa vanhu nekuda kwekushandisa chiteshi changu chekuchaja?
Ehe, iwe unobvumidzwa kubhadharisa vanhu nekuda kwekushandisa chiteshi chako kunyangwe vazhinji varidzi vechiteshi vachisarudza kupa zvemahara kuchaja sekukwezva kana kubatsirwa. Muenzaniso weiyi mushandirwi anopa mahara kubhadharisa kune vashandi vavo nevatengi. Ukasarudza kubhadharisa kuti ushandise pane zvinhu zvinoverengeka zvekutarisa mukuona izvo zvinonyanya kukunakira.
Kubhadharisa kushandiswa kunoenderana nenzvimbo. Sarudzo yako inoenderana nechikamu panzvimbo yairi kushanda. Mune dzimwe nzvimbo dzeNew York State, kunyanya mumaguta mahombe, mamwe magaraji anobhadharisa kupaka anogona kuwana vatengi vanoda kubhadhara mari yekuwedzera kuchaja kweEV nguva nenguva nekuti havana mari yekuchaja kwavanogara.
Kubhadharisa kushandiswa kunoenderana nechinangwa chekuisa saiti. Pundutso inogadzirwa nechiteshi hausi iwo wega mukana wekuunza kudzoka kubva mukudyara kubva kuchiteshi chekuchaja. Zviteshi zvekuchaja zvinogona kukwezva vatyairi veEV vanozochengetedza bhizinesi rako, kuchengetedza vashandi vakakosha, kana kupa pfungwa yehutariri hwezvakatipoteredza izvo zvingabatsira kukwezva vagari veEV nevasiri veEV, vashandi, kana vatengi.
Kubhadharisa kwekushandisa kunoshanda. Varidzi vechiteshi vanogona kubhadharisa kuti vashandiswe paawa, pamusangano, kana pauniti yemagetsi.
Paawa: Kana iwe uchichaja paawa, pane yakatarwa mutengo kune chero mota ingave iri kubhadharisa kana kwete, uye mota dzakasiyana dzinogashira magetsi pamitengo yakasiyana, saka mutengo wesimba unogona kusiyana zvakanyanya nekuchaja chikamu.
PaChikamu: Izvi zvinowanzo fanirwa zvakanyanya nenzvimbo yekuchaja yekuchaja kana zviteshi zvekuchaja izvo zvine zvipfupi, zvakajairwa zvikamu.
NeYuniti yeMagetsi (kazhinji kilowatt-awa [kWh]): Izvi zvinonyatso kubhadharira chaiko mutengo wemagetsi wemuridzi wechiteshi chekuchaja, asi hazvipe kurudziro kumotokari yakabhadhariswa zvizere kusiya nzvimbo
Vamwe varidzi vesaiti vakaedza kusanganisa kwemaitiro aya, sekubhadharisa mwero wakadzika kwemaawa maviri ekutanga, kozoti mwero unowedzera wemisangano yakareba. Dzimwe nzvimbo dzinogona kusarudza kudzikisa mashandiro avo nekusajoina chiteshi chechaji uye nekuchaja mahara.
Sei kubhadharisa kubasa kuchikosha?
Sezvo vanhu vazhinji vanodhiraivha kuenda kubasa uye vatyairi veEV vanofarira kuwedzera pamusoro pechavo pese pazvinogoneka kupa kubhadharisa pabasa ibasa rakakura revashandi revashandirwi kupa. Muchokwadi, kuchaja kubasa kunogona zvakapetwa sevashandi vaviri EV ese-emagetsi ezuva nezuva kuenda kunzvimbo. Kune vashandirwi, kubhadharisa pabasa kunogona kubatsira kukwezva nekuchengetedza vashandi vekucheka uye kuratidza hutungamiriri mukutora matekinoroji emagetsi akachena.
Bhurocha raNySERDA pabasa rekuchaja [PDF] inopa kutarisisa kwezvakanakira kuisa masitepisi ekuchaja kumabasa uye nhungamiro pane hurongwa hwekuronga, kuisa, uye kugadzirisa EV kudhara zvivakwa.
Dhipatimendi reMagetsi Kubasa Kubhadharisa saiti inopa kutungamira kune vanobata vashandi kuti vatore mukana webhenefiti iyi, pamwe neruzivo rwakadzama pakuongorora, kuronga, kuisa, uye kugadzirisa kubhadharisa pabasa.
Ndeapi maDC emachaja ekukurumidza kuchaja?
DC yekuchaja nekukurumidza inoshandisa yakananga-yazvino (DC) simba rekuchinjisa uye 480-volt inoshandura yazvino (AC) yekuisa kuti ipe zvinokurumidza zvakanyanya recharges munzvimbo dzinoshandiswa zvakanyanya veruzhinji nzvimbo dzekuchaja. Zvichienderana neEV, DC zviteshi zvekuchaja nekukurumidza zvinogona kupa iyo 80% recharge mune mashoma semaminetsi makumi maviri. Kuchaja kumhanya kunoenderana nemota bhatiri saizi uye kuchaja Hardware, asi mazhinji maEV anogona ikozvino kuchaja inopfuura 100 kW (anopfuura zana mamaira ehuremu mumaminitsi makumi maviri). DC yekuchaja nekukurumidza inonyanya kuita sarudzo ye ese-emagetsi motokari. Mashoma plug-in yemasanganiswa EVs inogona kushandisa DC inokurumidza majaja. Kune matatu makuru makuru ekubatanidza kweDC inokurumidza majaja; EVs dzinogona kushandisa DC inokurumidza charger inongowirirana neimwe yeanotevera:
SAE Yakabatanidzwa Yekuchaja Sisitimu (CCS) chiyero chinogamuchirwa chinoshandiswa nevakawanda chinoshandiswa nevazhinji vagadziri
CHAdeMO yakajairika yekuchaja mwero inonyanya kushandiswa neNissan neMistubishi
Tesla's Supercharger Network inoenderana nekambani yekuchaja tekinoroji iyo inogona kungoshandiswa chete nemota dzaTesla
Makambani mazhinji eruzhinji neakazvimiririra ari kuvaka zviteshi zvekuchaja zvakawanda muNew York State nekupfuura, kusanganisira New York Power Authority, Electrify America, EVgo, ChargePoint, Greenlots, nezvimwe.